‘महाकाली पारीको नेपाललाई नमुना बनाइन्छ’
२५१४ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ आषाढ ०१ , ०९:२१ बजे
ईन्द्रबहादुर रावत (मेयर पदका उम्मेदवार)
महाकाली नगरपालिका, नेकपा माओवादी केन्द्र
स्थानीय तहको निर्वाचन आउन केही दिन मात्र बाँकी रहेका बेला राजनीतिक दल उम्मेदवार चयन गरेर प्रचारप्रसारमा छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि कञ्चनपुरका सबै स्थानीय तहमा उम्मेदवारको टुंगो लगाइसकेको छ । माओवादी केन्द्रले महाकाली नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारमा ईन्द्रबहादुर रावतलाई अघि सारेको छ । माओवादीले महाकालीमा निर्वाचनको प्रचारप्रसार कसरी गरिरहेको छ र एजेण्डा के हुन् ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर उम्मेदवार ईन्द्रबहादुर रावतसँग पत्रकार मदन गिरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
महाकालीमा निर्वाचनको तयारी कस्तो छ ?
– चुनावी तयारी एकदम राम्रो छ । हरेक वडामा वडा कमिटी, प्रचारप्रसार कमिटी गठन गरेका छौं । हरेक वडाका उम्मेदवार पूूर्ण तयारीका साथ सभ्य तरिकाले चुनावको तयारीमा छन् ।
– घरदैलो अभियानको क्रममा मतदाताको घरमा पुग्दा आमूल परिवर्तनको खाँचो रहेको पाइयो । त्यसका लागि माओवादी केन्द्रको एजेण्डा उत्तम छ भन्ने मतदातालाई लागेको छ । यो पटक माओवादीलाई हेर्नुपर्छ भन्ने जनमत पाएको छु ।
महाकाली नगरको विकासका एजेण्डा के–के छन् ?
– महाकाली नगरको विकासका निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, सरसफाई र पर्यटकीय क्षेत्रको सुधार लगायत विषय रहेका छन् । पहिलो एजेण्डा भनेको बाढी रोकथाम हो । त्यसका लागि तटबन्ध निर्माण, वृक्षारोपणका साथै दीर्घकालीन योजनाका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन हाम्रो एजेण्डा हो । यहाँका जनतालाई प्राकृतिक प्रकोपबाट सुरक्षित राख्नेमा मेरोे जोड हुनेछ । त्यस्तै, आर्थिक समृद्धिका लागि हाटबजारलाई व्यवस्थित गर्ने र पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने, शिक्षाको गुणस्तरमा वृृद्धिसँगै आयमूूलक र सीपमूलक शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछौं । स्वास्थ्यमा सहज पहुँचका लागि स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गर्ने, कृषिको विकासका लागि सिँचाइको व्यवस्था, मलखाद तथा बीउबिजनको उपलब्धतामा जोड, आरक्षपीडित जनतालाई तुरुन्त राहत दिने मेरो एजेण्डा रहेका छन् । नगरपालिकाको जमिनलाई व्यवस्थापन गर्ने र जनताको जनजीवन उकास्नका लागि हाम्रो पहल हुनेछ ।
पर्यटकीय क्षेत्रमा तपाईको योजना के छ ?
– यहाँ एसियाकै लामो झोलुङ्गे पुल रहेको छ । दोधारा–चाँदनी झोलुङ्गे पुल हेर्नकै लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेका छन् । हामीले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न जुरुरी छ । पुलको संरक्षणका लागि नगरपालिका अन्तर्गत छुट्टै संरक्षण समिति बनाउने छांै । पुल नजिकै क्षेत्रको सामुदायिक वनमा रहेको ताललाई व्यवस्थापन गरेर माछापालनका साथै बीचमा पुलको व्यवस्था गरेर पार्क निर्माण गर्ने छौं । वडा नम्बर ४ र ६ मा रहेको तालमा माछापालन गर्ने ताल व्यवस्थित गरेर तालमा डुङ्गा चलाएर पर्यटकीय स्थल बनाउने योजना छ । र, यस क्षेत्रमा रहेका तालतलैया, मठमन्दिर व्यवस्थापन, पर्यटकको आगमनमा वृद्धि गर्न बजार व्यवस्थित तथा आधुुनिकरण गर्ने र पर्यटन विकास समिति नै स्थापना गरिने छ । यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने हाम्रो संकल्प हो । पर्यटनको विकास गर्न सक्यो भने यो क्षेत्रको आर्थिक रुपले पनि सबल बन्ने छ ।
युवा क्षेत्रमा के योजना छ ?
– पक्कै पनि यहाँ धेरै युवा बेरोजगार छन् । बेरोजगारीको समस्या समाधानको लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छौं । त्यस्तै युवालाई कृषि, व्यापार र पशुपालनमा प्रोत्साहन गरिने छ । र, आयमूलक, सीपमूूलक कार्यमा जोड दिने छौं ।
महाकाली नगरवासीका समस्या समाधानका लागि तपाईको प्रयास के रहन्छ ?
– यहाँका जनताका थुप्रै समस्या छन् । यहाँका प्रमुख समस्या भनेको महाकाली र जोगबुढा नदीको कटान समस्या हो । सबै ठाउँमा बाटोघाटो निर्माण हुन सकेको छैन भने विद्युतको पहुँच पनि छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा लागयतका विविध समस्या छन् । त्यसका साथै यहाँका जनताले चलनभोग गरेको जमिनको लालपूूर्जा पाएका छैनन् । महाकाली र जोगबुढा नदीको कटान नियन्त्रणका लागि गुरुयोजना बनाउने र महाकाली नदीलाई पक्की बाँधका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघबाट पहल गरिने छ । हरेक टोल बस्तीमा विद्युत् पु¥याउनुपर्ने छ । टोलटोलमा कालोपत्रे सडकको आवश्यकता छ । चलनभोग गरेको जमिनलाई लालपूर्जा वितरण गर्नुपर्ने लगायतका थुप्रै नगरवासीका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने छ । म नेतृत्वमा पुगेमा अवश्य पनि प्रतिवद्धता पूरा गर्नेछु ।
– समग्रमा हाम्रो पार्टीको एजेण्डा नै मेरो जितको आधार हो । मेरो व्यक्तिगत छवी र योजना पनि अर्को आधार हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र लगायत स्थानीय तह र सिंहदरबारका अधिकार गाउँ, नगरमा ल्याउने एजेण्डा माओवादी केन्द्रको हो । जुन आज पूरा भएको छ । जनताले अधिकार पाएका छन् । पार्टीको मुल नारा र एजेण्डाकै कारण हामी जित्ने छौं ।
पार्टीले तपाईलाई विश्वास गर्नुको कारण ?
– स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा देखाउनुु वा दाबी गर्नु स्वभाविक हो । करिब २७ वर्षे राजनीतिक जीवन पश्चात् नगरको प्रमुख पदको उम्मेदवार बनेको छु । पार्टीले विश्वास गरेको छ । विगत लामो समयदेखि पार्टीमा मेरो योगदान र यहाँको समाजको लागि विभिन्न रुपमा काम गरेको जनविश्वासले नै म अगाडि सरेको हुँ ।
महाकाली भारतसँग सीमा जोडिएको नगरपालिका हो । भारतीय पक्षबाट पटक–पटक दुव्र्यवहार हुने गरेको छ । कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
– वास्तवमा महाकाली नगर क्षेत्र भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डसँग जोडिएको छ । समय–समयमा यहाँका जनताले भारतीय पक्षको दुव्र्यवहार खेप्दै आएका छन् । यो गम्भीर समस्याका रुपमा रहेको छ । समस्या समाधानका लागि संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरेर छिमेकी राष्ट्रसँग समाधानको पहल गरिने छ ।
तपाईको मुख्य प्रतिस्पर्धी को ?
– अहिलेको मुख्य प्रतिपस्र्धी भनेको नेपाली कांग्रेस नै हो । तर, माओवादी केन्द्रको जित सुनिश्चत छ ।
निर्वाचित भएमा पहिलो प्राथमितकता के रहने छ ?
– महाकाली नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएपछि भूमिहीनलाई परिचयपत्र वितरण गर्नेछु । यहाँका कतिपय जनता भूूमिहीन छन्, उनीहरूको समस्या समाधानका लागि पहलकदमी रहने छ । परिचयपत्रका आधारमा आवासको व्यवस्था गरिने छ । त्यसलगत्तै लालपूूर्जा नभएका जग्गाधनीलाई लालपूर्जा वितरणको लागि पहल गरिने छ । महाकाली, जोगबुढा नदी व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम अघि बढाइने छ । समग्रमा महाकाली नगरपालिकालाई सुन्दर, समृद्ध र पर्र्यटकीय नगरीका रुपमा विकास गर्ने मेरो लक्ष्य रहेको छ ।